Behmaster Kingpin: Wareysi Sebastiaan van der Lans | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Behmaster Kingpin: Wareysi Sebastiaan van der Lans
Behmaster Kingpin: Wareysi Sebastiaan van der Lans
Sebastiaan van der Lans waa aasaasaha iyo mulkiilaha wakaalada webka Van Ons. Laga bilaabo 2006, Van Ons wuxuu ku koray hay'ad hormuud ah oo tignoolajiyadeed Amsterdam oo ay la socdaan koox khubaro ah oo 25 ah kuwaas oo diiradda saaraya dhisidda boggaga WordPress, dukaamo iyo codsiyo magacyo waaweyn sida IKEA, Intratuin (dukaanka beerta tafaariiqda ee ugu weyn Nederlaan) iyo Koffietijd ( show TV Nederland ah), iyo kuwo kale.
Sebastiaan diiradda u gaarka ah ayaa dhawaan u wareegay WordProof, oo ah adeeg isticmaala awoodda tignoolajiyada blockchain si uu u ilaaliyo macluumaadkaaga WordPress si saaxiibtinimo leh.
Adigoo wax ku biirinaya WordPress iyo bulshada ka dambeysa sida qabanqaabiyaha WordCamp, wax ku biiriye, iyo ku hadla (kuwa kale) sanadba sanadka ka dambeeya, waa cadaalad in la yiraahdo wuxuu ka tagay raadkiisa WordPress.
Waxaad ka heli kartaa Sebastiaan on Twitter iyo LinkedIn.
Q1: Waa maxay taariikhdaada iyo sidee markii ugu horeysay uga qayb qaadatay WordPress?
Sannadkii 2006dii waxaan bilaabay wakaaladda shabakadda Van Ons aniga iyo Robert van Eekhout. Waxa aanu la shaqaynaynay WordPress ilaa 2007 waxana aanu sidoo kale tababarnay wakaalado kale isticmaalka WordPress. Waxaan ku bilownay samaynta CMS noo gaar ah, laakiin isla markiiba waxaan helnay software-ka WordPress iyo falsafada, kaas oo aan si degdeg ah u qaadannay.
Markii aan bilownay, waxaan si joogto ah u helnay fariimaha xanaaqa leh ee wakaaladaha kale - "Waxaad ku burburinaysaa suuqa software-kaaga bilaashka ah!" - Kuwani waxay ahaayeen calaamado muujinaya in WordPress uu noqon doono mid weyn.
Waxaan had iyo jeer daabacnay wax badan, labadaba Van-Ons.nl, mareegahayaga gaarka ah iyo maalintii dambe ee WPleren.nl. Goobta dambe waxay si dhakhso ah u heshay tobanaan kun oo booqasho bishii. Markii aan bixinay aqoon badan - tusaale ahaan ku saabsan sida loo dhiso webshop leh WordPress - waxaan awoodnay inaan si weyn u korinno wakaalad ahaan xayeysiis la'aan.
Van Ons hadda wuxuu leeyahay 25 shaqaale ah xafiiska, iyo qaar badan oo ka mid ah bogagga WordPress iyo dukaamada ugu waaweyn ee Nederlaan ayaa ku jira faylalka. Wakaalad ahaan, waxaan diiradda saareynaa tignoolajiyada - waxaan ku dhisnay waxyaabaha ugu waalan ee WordPress, sida shaashadaha labaad ee Koffietijd.nl, kuwaas oo ay isticmaaleen kumanaan daawadayaal ah isku mar. Kooxdaydu waxay kaloo abuurtay plugin WordPress WP GDPR Compliance (in ka badan 1.3 milyan la soo dejistay).
2013, waxaan dhisnay Bitcoin iyo blockchain codsigeena ugu horeeyay, isku darka khibradeena software il furan iyo bulshooyinka ka socda WordPress oo leh awoodaha tignoolajiyada blockchain. Thanks to WordPress, daabacaaddu waxay noqotay mid dimuqraadi ah (ay ku jirto oo qof walba heli karo).
Iyada oo tignoolajiyada blockchain, waxaan daabici karnaa mabaadi'da ka dhigtay bulshada WordPress mid aad u weyn dhammaan dhinacyada kale ee ka baxsan.
Q2: Maxay tahay inay akhristayaasha ka ogaadaan dhammaan walxaha aad ku samaynayso WordPress maalmahan?
Waxaan software-ka la shaqaynayay wakhti buuxa ku dhawaad ​​12 sano. Waxaan aasaasay WordProof 2018, hab il furan oo lagu ilaaliyo waxa ku jira blockchain oo aan ku tuso runnimadaada akhristayaasha iyo makiinadaha raadinta. Waqti-samaynta waa habka isha furan ee lagu ilaaliyo macluumaadkaaga.
Markaad sheegato maamulka iyo xuquuqda daabacaada, waxaad tustaa akhristayaasha, iibsadayaasha iyo makiinadaha raadinta in aadan faragelin macluumaadkaaga. Waxaan la shaqeynaa xisbiyada ISO iyo SEO si aan uga dhigno timestamps halbeeg shabakadeed sababtoo ah waxay ka dhigaan webka meel ka wanaagsan oo ammaan ah.
Markaan joogo WordCamp Europe, waxaa la igu martiqaaday inaan bixiyo qoraal muhiim ah oo ku saabsan aragtidayda WordPress iyo blockchain sanadaha soo socda. Waxay ahayd mid ka mid ah waxyaabihii iigu cabsida badnaa ee aan sameeyo, sababtoo ah waxay ahayd soo jeedintaydii ugu horreysay ee weligeed Ingiriisi! Si aan isu diyaariyo, waxaan dhammeeyey koorsada Ingiriisiga waxaanan ku celceliyey bandhigga si adag. Hal shay ayaa u horseeday mid kale oo hadda waxaan la shaqeeyaa koox 5 ah WordProof Timestamp waqti buuxa.
Waxaan ka caawinnaa daabacayaasha, hal-abuurka, siyaasiyiinta, iyo ganacsatada si ay u ilaaliyaan waxa ku jira blockchain. Waxaan sidoo kale si adag u shaqeynaa si aan u hubinno in makiinadaha raadinta ay u arkaan calaamadaha waqtiyada sida qiimaha leh si internetku u noqdo meel daacad ah - meel ay booqdayaashu ay xaqiijin karaan ilaha iyo macaamiisha webshops waxay muujin karaan alaabooyinka ay soo iibsadeen, iyo shuruudaha. Waxaad isku dayi kartaa WordProof si bilaash ah tijaabo, kaas oo kuu ogolaanaya inaad waqti ku dhejiso 10 qaybood oo ka kooban!
Dunida maaliyadeed iyo ganacsi samaynta, guud ahaan, waxay noqon doontaa mid hufan, cadaalad ah oo loo dhan yahay laga bilaabo A-Z iyada oo loo marayo tignoolajiyada isha furan. Uber u qaado tusaale ahaan: markii Uber bilaabay, ururku wuxuu helay komishanka 15%. Hadda, meelo badan, 25% dakhligu wuxuu aadaa Uber lafteeda, darawaliintuna ma haystaan ​​dammaanad tani ma noqon doonto 30% 5 sano gudahood - Uber ayaa go'aansata.
Bal qiyaas il furan oo beddelka ah kaas oo dhammaan software-ka oo sidaas awgeed caqli-galku si guud loo heli karo. Tusaale ahaan, waxaa la qorsheyn karaa in kaliya 5% halkii 25% loo qoondeeyay dayactirka shabakada. Taas 5% kaliya ayaa la bedeli karaa haddii badi darawalada iyo/ama macaamiisha ay ogolaadaan isbeddel. 5 kan halkii aad ka ahaan lahayd 25% komishanka, waxaad markaas hubin kartaa in darawaladu kasbadaan 10% ka badan. Waa guul-guul Taasi waa kacaanka il furan software iyo bulshooyin keeni doona 10 sano ee soo socda!
S3: Maxaa caqabado ah ayaad kala kulantay inaad meesha aad hadda joogto si xirfadaysan?
Isha furan waxay leedahay isbarbar-dhig adag: u samaynta wakhti la heli karo horumarinta software il furan waxay ku kacdaa lacag aad u badan. Waxay igu qaadatay 10 sano inaan awoodo inaan sameeyo software dhab ah shirkad ahaan. Dunida blockchain waxay leedahay habab dimoqraadi ah oo dhowr ah oo loogu talagalay maalgelinta nidaamyada ilaha furan oo aan u arko mid aad u dhiirigeliya oo aan jeclaan lahaa inaan keeno WordPress. Maqaalkan, waxaan ku sharaxay sida WordProof uu ku bilaabay $10,000+ ee Nidaamka Soo jeedinta Shaqaalaha.
Intarneetku wax badan buu noo keenay, laakiin shabkada sida aynu ognahay maanta way jabtay. Anaga hadaan nahay bulshada WordPress waxaan tusnay in software-ka ugu wanaagsan webka uu noqon karo il furan oo bilaash ah – sidaas ayaan ku noqonay hogaamiyaha suuqa. Weli waan la dhacay, mar kasta oo aan taas ka fekero.
Waxaan qarka u saarnaa kacdoon dhab ah: kacaanka blockchain. Waxa suurtagal noqon doonta in aan macluumaadka kaliya laga dhigin ee sidoo kale la qiimeeyo (sida lacagta) barnaamij. Tani waxay si buuxda u furaysaa fursado cusub oo loogu talagalay software-ka isha furan: waxaan ka dhigi karnaa shirkadaha oo dhan kuwo hufan annagoo ku borogaraamayna macquulka software il furan. Waxaan arrintan kaga hadlay WordCamp Europe:
Q4: Ma jiraan wax kaa yaabiyay markaad ku jirto aduunka WordPress?
Inaad noqoto hogaamiye suuq nabadeed leh WordPress. Bulshada + code ayaa ka dhigaysa hogaamiyaha suuqa. Taasi waa mid gaar ah.
Waxa kale oo iga yaabiya waa in hindisayaasha wanaagsani aanay helin maalgelin. Ilaah ha nagu barakeeyo in Yoast Diversity Fund uu jiro, laakiin wax badan ayaa loo baahan yahay in la sameeyo si dadaallo wanaagsan looga saaro dhulka. Waxaan ahay u doode xooggan oo ka dhigaya WordPress iyo bulshooyinka blockchain inay wada shaqeeyaan oo midba midka kale ka faa'iidaysto dhaqamada ugu wanaagsan. Waxaan si wadajir ah uga dhigi karnaa adduunka mid furfuran!
Dunida blockchain, waxaa jira hab lagu maalgeliyo software il furan oo aan u maleynayo inay si buuxda cadaalad u tahay: Sanduuqa Soo jeedinta Shaqaalaha. Hal-abuure ahaan, waxaad dejin kartaa xalka aad rabto inaad samayso, muddada ay kugu qaadanayso samaynta, iyo inta lacag ee aad u baahan tahay muddadaas. Kuwa haysta calaamada blockchain waxay u codayn karaan inaad mashruuca ka heli doonto iyo in kale.
Soo dhawaynta Gutenberg waa inay fiicnaataa. Waxa aan aad ula yaabay iska caabinteeda. Waa inaan u aragnaa tan sidii bandhig bandhig oo aan u keenaynaa CMS kasta oo kale oo adduunka ah. Van Ons ahaan, waxaanu hogaanka u qabanay anagoo horumarinayna Laraberg, kaas oo Gutenberg keenaya Laravel.
Tifaftiraha cusub ee xannibaadda, waxaan dooneynaa inaan ka korineyno saamiga suuqa WordPress 34% ilaa ugu yaraan 75% 10ka sano ee soo socota.
Tifaftiraha cusub ee xannibaadda waxaan dooneynaa inaan ka korin karno WordPress 34% ilaa 75% 10ka sano ee soo socota. 🗣 Akhri wareysiga aan la yeelanay @delans, aasaasaha @WordProofio iyo @VanOnsnlRiix halkan Tweet
Q5: Muxuu mustaqbalka kuugu eg yahay adduunka WordPress?
Hadafkaygu waa in aan keeno habka saaxiibtinimo, furfuran, iyo iskaashiga taas oo ka dhigaysa aduunka WordPress mid aad u xoogan aduunka maaliyadeed iyo ganacsiga guud ahaan. Waxaan rabaa in aan quruxda WordPress u keeno adduunka blockchain, iyo quruxda adduunka blockchain, oo leh moodooyin ganacsi oo waara oo caqli badan, adduunka WordPress.
Q6: Maxaad ka raadisaa martigeliyaha WordPress?
Diirada saarista xawaaraha waa lama huraan, sidoo kale waa taageero tayo sare leh - labadaba inta lagu jiro usbuuca iyo dhammaadka usbuuca. Ugu dambeyntii, waxaa muhiim ah in noocyada softiweerku ay yihiin kuwa cusub mar walba (sida PHP, CURL, iwm.).
Q7: Maxaad ku raaxaysataa inaad samayso markaad ka maqan tahay laptop-kaaga?
Rubik's Cube. Ma khiyaami kartid! Kaliya KPI waa xawaaraha. Rikoorkaygu waa 25.64 ilbiriqsi.
S8: Kumaan waraysanaa marka xiga & sababta?
Noël Tock, waxa uu ku sameeyo heerka ganacsiga macaamiishiisa waa wax cajiib ah. Iyo Rian Rietveld oo ka socda Heerka Heerka kaas oo ah halyeyga sare ee la isticmaali karo iyo ka mid noqoshada.
Sida looga gudbo xannibaadda Apple Pay Express Transit
5 Caqabad ku ah Guusha SEO